वाल्ट ह्वाइटम्यानको १० छोटो वाक्य वर्तमान साहित्य
वाल्ट ह्वाइटम्यानबाट १० छोटो उद्धरणहरू
एनकर्नी आर्कोया | | लेखकहरू, साहित्य, कविता
वाल्ट ह्विटम्यान, अमेरिकी कवि, १1819 १ in मा जन्मेका थिए र १ 1892 in died मा उनको मृत्यु भयो। उनको जीवनभर हामीलाई यस प्रकारका भव्य रचनाहरू छोड्नुका साथै। ओह, क्याप्टेन! मेरो कप्तान! "," मेरो शरीरको सीमा "," घाँसको ब्लेड " o "मेरो गीत", असंख्य वाक्यांशहरू छोडियो जुन हामी प्रत्येकमा एक छोटो जीवन शिक्षा पाउन सक्दछौं।
धेरै कविहरू उनको आधुनिक कविताबाट प्रभावित थिए, साथै महानहरू सहित रुबेन डारियो, वालेस स्टीभन्स, डीएच लरेन्स, फर्नांडो पेसोआ, फेडरिको गार्सिया लोर्का, जर्ज लुइस बोर्जेस, पाब्लो नेरुडा, आदि
त्यसो भए हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं वाल्ट ह्वाइटम्यानबाट १० छोटो उद्धरणहरू यसले हामीलाई उहाँबारे, उसको चरित्र, उसको मानवतावाद बारे धेरै बताउँछ ...
1 छोटो वाक्यांश र उद्धरण
2 वाल्ट ह्वाइटम्यानको बारेमा उपशीर्षक वृत्तचित्र
3 वाल्ट ह्वाइटम्यानको जिज्ञासा
3.1 वाल्ट व्हिटम्यानका बुबा
3.2 आफ्नो कामको समीक्षाको साथ ओब्स
3.3 ऊ आफ्नै कामको सेल्फ प्रमोशन भयो
3.4 फिटनेस सल्लाहहरू वाल्ट व्हाइटम्यानले पछाडि छोडिदिए
3.5 वाल्ट व्हिटम्यानको दिमाग रद्दीटोकरीमा फ्याँकियो
4 वाल्ट ह्वाइटम्यानबाट अन्य प्रसिद्ध उद्धरणहरू
छोटो वाक्यांश र उद्धरण
“जब म कसैलाई भेट्छु मलाई केही फरक पर्दैन यदि तिनीहरू सेता, कालो, यहूदी वा मुस्लिम छन् भने। उहाँ मानव हुनुहुन्छ भनेर जान्न मलाई पर्याप्त छ।
Love जसले प्रेम बिना एक मिनेट हिड्छ, उहाँ आफ्नो अन्त्येष्टि तिर आउँछ।
"यदि म अहिले नै मेरो गन्तव्यमा पुगेँ भने, म खुशीले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछु, र यदि १० करोड बर्ष नबढुञ्जेल सम्म म नआएँ भने म खुशीले पनि पर्खनेछु।"
You गुलाबहरू लिनुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ
समय छिटो उड्छ।
आज उही फूल जुन तपाईं प्रशंसा गर्नुहुन्छ,
भोली उनी मरिनेछ ... »।
I के म आफैले विरोधाभास गर्छु? हो, म आफैंको विरोधाभास छु। अनि त्यो? (म असीम छु, मसँग बहुमतहरू छन्)।
"मेरो लागि, दिन र रातको हरेक घण्टा, एक अवर्णनीय र उत्तम चमत्कार हो।"
"जहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ असीमित ठाउँ छ, जति सक्दो घण्टा गणना गर्नुहोस्, अघि र पछिको असीमित समय छ।"
"यदि तपाईंले मलाई चाँडै भेट्टाउनु भएन भने निराश नहुनुहोस्। यदि म एक ठाउँमा छैन भने, अर्को ठाउँमा मलाई खोज्नुहोस्। कतै म तपाईंको लागि पर्खिरहेको छु।
«हामी सँगै थिए, पछि म बिर्सें»
«मैले सिकेको छु कि मेरो मनको चीजको साथ हुनु पर्याप्त छ।
वाल्ट ह्वाइटम्यानको बारेमा उपशीर्षक वृत्तचित्र
र जसरी तपाईलाई मेरो अन्य भर्खरका लेखहरू बारे थाहा भइसकेको छ, म तपाईंलाई धेरै नै राम्रो युट्युब प्लेटफर्म, भिडियोहरू वा वृत्तचित्रहरूमा हेर्न खोज्दछु जुन लेखकले हामीसँग काम गरिरहेका छौं। यहाँ म एक धेरै राम्रो प्रस्तुत गर्दछु जुन मैले वाल्ट ह्वाइटम्यानको बारेमा पत्ता लगाएको छु, यो उपशीर्षक हो।
वाल्ट ह्वाइटम्यानको जिज्ञासा
२०१० ले वाल्ट ह्वाइटम्यानको २०० औं वार्षिकोत्सव मनायो, जसमध्ये एक कविहरू मध्ये एक मानिन्छ १ the औं शताब्दीको उत्तरार्धमा अमेरिकाको सर्वश्रेष्ठ. यद्यपि कुनै पनि व्यक्ति जस्तै त्यहाँ केहि गुणहरू छन् जसले यसलाई अद्वितीय बनाउँदछ, वा त्यसले हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्दछ।
हामी यस लेखकको केहि धेरै उल्लेखनीय उत्सुकताहरू संकलन गर्न चाहन्छौं। र ती मध्ये केहीले तपाईंलाई थोरै आश्चर्य चकित पार्नुहुनेछ।
वाल्ट व्हिटम्यानका बुबा
वाल्ट ह्वाइटम्यान १1819१ to देखि १ 1892 XNUMX २ सम्म जीवित थिए। उनी अमेरिकामा आधुनिक कविताका "पिता" र कविता परिवर्तन गर्ने मानिस भनेर चिनिन्छन्। यद्यपि उनको कविताहरुबाट लिन सकिने कुरा, विशेष गरी आत्मकथा "अगाडि गएको केटा थियो" भन्ने कुरा यो हो कि उसको बुबासँगको सम्बन्ध मुर्ख थिएन।
वास्तवमा, ऊ ऊ हो भनेर बताउँछ शक्तिशाली मानिस, अधिनायकवादी, दुष्ट, अन्यायी र रिसाएको। अर्को शब्दहरुमा, एक व्यक्ति जो हिंस्र गर्न सक्छ यदि उसले आफूले चाहेको कुरा गरेन भने। अब हामी एक त्यस्तो समयको बारेमा कुरा गर्दैछौं जब धेरै परिवार र अभिभावकहरूमा यो दृष्टिकोण सामान्य थियो।
आफ्नो कामको समीक्षाको साथ ओब्स
व्हिटम्यानका लागि, पूर्णता महत्त्वपूर्ण थियो। यति सम्म कि उसले यो आफ्नै कामहरूद्वारा पनि गर्‍यो। म सँधै केहि परिवर्तन गर्दै थिए किनभने मैले सोचे कि म यसलाई सुधार गर्न सक्छु। त्यसकारण उनलाई पनि आफ्ना लेखहरू उज्यालो हुन समस्या भयो।
उहाँ तिनीहरूलाई सच्याइरहनुभयो, परिवर्तन गर्दै, चीजहरू परिमार्जन गर्दै। वास्तवमा, उनको काम "घाँसका पातहरू" मा १२ कविताहरू सम्मिलित थिए र उनले आफ्नो जीवन भर निरन्तर तिनीहरूलाई परिवर्तन गरे किनभने उनी उनीहरूसँग सन्तुष्ट थिएनन्।
ऊ आफ्नै कामको सेल्फ प्रमोशन भयो
जब कुनै लेखकले आफ्नो पुस्तकको बारेमा कुरा गर्छन्, तब सामान्य व्यक्तिको लागि सामान्य व्यक्तिले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्नु पर्छ। तर व्हिटम्यानले अलि बढि जानुभयो। र के यो हो कि उहाँसँग धेरै नकारात्मक समीक्षाहरू थिए, यथार्थ हो यदि हामीले ध्यान दियौं भने कि उनका कविताहरू त्यस समयमा "सामान्य" मा थिएनन्, उनले अभिनय गरे।
के गर्नुभयो? राम्रो अखबारमा उनको कामको फाइदा लिनुहोस् समीक्षा लेख्नको लागि, अन्य नाम अन्तर्गत, कार्यको प्रशंसा गर्दै र बहस गर्दै कि यो राम्रो थियो तर तिनीहरूले उहाँलाई चिन्दैनन् र उनी हराइरहेको कुरा जान्दैनथे। र यी सबै आत्म-आलोचनाहरू उहाँको पुस्तकबाट बाहिर आउँदै गरेको संस्करणका अंशहरू थिए।
फिटनेस सल्लाहहरू वाल्ट व्हाइटम्यानले पछाडि छोडिदिए
ठिक छ, यो हामीले आविष्कार गरेको कुरा होईन। वास्तवमा, यस कविले "पुरुषहरूको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको लागि मार्गनिर्देशन" लेखेका थिए। वास्तवमा, यी लेखहरू थिए जुन न्यु योर्क एटलसमा लेखकले विशेष रूपमा फिटनेस सेक्सनमा प्रकाशित गरेका थिए।
उनले यो गरे उपनाम Mose Velsor, एक जसमा उनी पत्रकारको रूपमा काम गर्थे जब उसको आर्थिक समस्या थियो। र उनको सल्लाह आकर्षक छ। उदाहरण को लागी, एक दिन मा तीन खाना खानु (ब्रेकफास्ट, खाजा, र बेलुका)। तर यो त्यहाँ रोकिएन। उसले तिमीलाई भन्यो कि तपाईले प्रत्येकमा के खानुहुन्छ: पकाएको आलुको साथ ताजा मासु; ताजा मासु; र फल वा कम्पोटेट। त्यो उनको आहार थियो।
बिहानको व्यायामको एक घण्टा सम्पूर्ण शरीरलाई व्यायाम गर्न, महिलासँग नभई साथीहरूसँग धेरै समय बिताउनु, वा दाह्री बढाउनु र मोजा लगाउनु भन्ने अन्य सुझावहरू थिए जुन कविले ती लेखहरूमा दर्शाउँदछ।
वाल्ट व्हिटम्यानको दिमाग रद्दीटोकरीमा फ्याँकियो
ह्वाइटम्यानले सोधे कि कुनै मानिसलाई भेट्न तपाईको दिमागमा जानु पर्छ। सायद यसै कारणले गर्दा, जब उनी बित्नुभयो उनको दिमाग अमेरिकी एन्थ्रोपोमेट्रिक सोसाइटीमा पठाइएको थियो. त्यहाँ तिनीहरूले त्यस व्यक्तिको जीवनको बारेमा सम्बन्धहरू स्थापित गर्न त्यो अंगको तौल र मापनको साथ व्यवहार गरे।
समस्या यो छ कि दिमाग भुँइमा खस्यो र चकनाचूर भयो, अन्ततः फ्याँकियो। यस्तो नतिजा कि कोही पनि जानु हुँदैन।
वाल्ट ह्वाइटम्यानबाट अन्य प्रसिद्ध उद्धरणहरू
वाल्ट ह्वाइटम्यानले धेरै वाक्यांशहरू छोडेका छन् जुन ज्ञात छन्, जस्तो कि अघिल्लोहरू जुन हामीले तपाईंलाई प्रस्तुत गरेका थियौं। यद्यपि त्यहाँ अरू पनि छन् जुन आफैंमा महत्त्वपूर्ण छन् र थिए बोलेको वा तपाईंको जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा लेखिएको.
यति धेरै, कि हामी ती केहि कम्पाइल गर्न चाहान्छौं कि, जब तपाईं तिनीहरूलाई पढ्नुहुन्छ, तपाईंमा एक म्याकेनिजी सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ हाम्रो छनौटहरू को हुन्?
म अस्तित्वमा छु, म पर्याप्त छ, यदि यस संसारमा कसैले पनि ध्यान दिएन भने, म खुशी महसुस गर्छु, र यदि प्रत्येक र सबैले यो महसुस गरे, म खुशी हुन्छु।
कस्तो अनौठो, यदि तपाईं मलाई भेट्न आउनुहुन्छ र मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मसँग किन बोल्नुहुन्न? र किन म तपाईं संग कुरा गर्नुहुन्न?
म हरेक दिन नयाँ वाल्ट ह्वाइटम्यानको भेट्छु। त्यहाँ एक दर्जन तल छन्। मलाई थाहा छैन म को हुँ।
सबैको dirtiest पुस्तक काटिएको पुस्तक हो।
घाँसमा मसँग आराम गर्नुहोस्, तपाईंको घाँटीको टुप्पामा जानुहोस्; मलाई चाहिने शब्दहरू, वा संगीत वा कविता, वा भन्सार वा भाषणहरू होइन, उत्तम पनि होइन; केवल शान्त जुन मलाई मनपर्दछ, तपाईंको बहुमूल्य आवाजको गुन।
दिन र रात मसँग रोक्नुहोस् र तपाईं सबै कविताहरूको उत्पत्ति पाउनुहुनेछ, तपाईं पृथ्वी र सूर्यको राम्रो अधिकार पाउनुहुनेछ ... लाखौं सूर्यहरू बाँकी छन्, तपाईं अब दोस्रो वा तेस्रो हातका चीजहरू लिनुहुन्न ... न त तपाईं मरेका आँखालाई हेर्नुहुनेछ ... न त तपाईं किताबहरूमा रहेको भूतप्रेतलाई खुवाउनुहुनेछ, न त मेरो आँखाले हेर्नुहुनेछ, न त तपाईं मबाट चीज लिनुहुनेछ, जताततै सुन्नुहुनेछ र आफैंबाट फिल्टर गर्नुहोस्।
भविष्य वर्तमान भन्दा अधिक अनिश्चित छैन।
कला को कला, अभिव्यक्ति को महिमा र पत्रहरु को सूर्य को प्रकाश सरलता हो
घाँसको सानो पनीले हामीलाई सिकाउँछ कि मृत्यु अवस्थित छैन; यदि यो कहिल्यै अस्तित्वमा छ भने, यो केवल जीवन उत्पादन गर्न थियो।
अनन्त अज्ञात नायकहरू जति मूल्यको हुन्छ इतिहासको सबैभन्दा महान नायकहरू जस्तो।
म आफूलाई मनाउँछु र गाउँछु। म आफैले जे भन्छु, म तपाईंको बारेमा भन्छु, किनकि जे मसँग छ त्यो तपाईंकै हो, र मेरो शरीरको प्रत्येक अणु पनि तपाईंको हो।
बटालहरू उस्तै मनोभावमा हराइन्छ जुन उनीहरूले जितेका छन्।
र अदृश्यलाई दृश्यात्मकद्वारा परीक्षण गरिन्छ, जबसम्म दृश्यात्मक अदृश्य हुन्छ र बदलेमा यसको परीक्षण हुँदैन।
के तपाईंले केवल ती व्यक्तिहरूबाट पाठ सिक्नुभयो जसले तपाईंको प्रशंसा गरे, तपाईंको साथमा कोमल थिए, र तपाईंलाई अलग बनाए? के तपाईंले उनीहरू विरूद्ध ठूलो पाठहरू सिक्नुभएन जसले तपाईंको विरुद्द तयार गरे र तपाईंसँग विवादास्पद प्यासेजहरू छन्?
सबै चीजको रहस्य भनेको क्षणमा, मुटुको धडकन, क्षणको बाढीमा लेख्नु हो, कुनै कुराकानी बिना सोचबिचार छोड्नु, तपाईको शैलीको चिन्ता नगरिकन, उपयुक्त क्षण वा ठाउँको लागि पर्खेर। मैले जहिले पनि त्यस्तै काम गरें। मैले कागजको पहिलो टुक्रा लिएँ, पहिलो ढोका, पहिलो डेस्क, र मैले लेखें, मैले लेखें, मैले लेखें ... इन्स्टन्टमा लेखेर जीवनको मुटुको धडकन समातिन्छ।
अधिक ज्ञानको साथ बाटो प्रशस्त हुन्छ। एक सच्चा लेखकको चिह्न उसको परिचितलाई रहस्यमय बनाउन र अनौंठोलाई परिचित गर्ने क्षमता हो।
लेखकले मानिसका लागि अरु केही गर्न सक्दैन केवल उनीहरु लाई आफ्नै आत्माको असीम सम्भावना देखाउँदै।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » वाल्ट ह्वाइटम्यानबाट १० छोटो उद्धरणहरू
भिक्टर रिवेरा पासको भन्यो
अधिक वा कम यस्तो पढ्ने पद हराइरहेको छ:
एक दिन र एक रात मसँग बस्नुहोस्
र तपाइँ सबै कविताहरु को मूल थाहा हुनेछ ... »
भिक्टर रिभेरा पासकोलाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस डी गó्गोरा। उनको मृत्युको वार्षिकी। Selected चयनित सोनेट
अलेक्ज्याण्डर पोप। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। उहाँको कामको अंशहरू